Esikhathini kusukela ngo-Okthoba 16 ukuya ku-22, izimpikiswano ezimbili empilweni yakho ziyoma ngokuqinile: ubudlelwano nemali. NgoMsombuluko noma ngoLwesibili, nabantu abakuzungezile nabakuzungezile, izingxabano zingenzeka ngenxa yokungaboni kahle okuhlobene nokufisa kwakho nokuhlukunyezwa. Zama ukubekezelela futhi ubeke phansi, kungenjalo uzozisola kakhulu. Ingxenye yesibili yesonto izoletha ukuthula nokuthula kulobudlelwano. Kungase kube nezinkinga ngemali ngenxa yokulahlekelwa impahla: ukudilizwa kwemishini yasendlini, izimoto.
Esikhathini sokuqala seviki, isici esiyinhloko sesibonakaliso sakho siqine - inkani. Isifiso kuzo zonke izindleko ukuphoqa wena ngokwakho manje awuseduze. Zama ukuhlehlisa izingxoxo zokusebenza noma izinkulumo ezinkulu nezihlobo uma zihlelwe ngoMsombuluko, ngoLwesibili, ngoLwesithathu. Futhi, ungalungiseleli imisebenzi yasekhaya ekuqaleni kwesonto njengokulungisa, ukuhlanza jikelele, ukulungisa kabusha ifenisha. Izinsuku ezintathu noma ezine zesonto zingcono kulokhu. Umsebenzi uzohamba kahle, futhi inqubo kanye nomphumela kuzoletha injabulo eyengeziwe.
Kulezi zinsuku eziyisikhombisa, izinkanyezi zikululeka ukuba ube ngummemezeli. Isixuku esikhulu sabantu, imihlangano, izinkampani ezinobungane, kanye nokusebenza kanzima nokuzikhandla ngokomzimba manje sekuphikisana. Unokunciphisa amandla futhi wehla ekusebenzeni kahle. Manje awunawo indawo yokuthola amandla nokugcina amandla, ngakho nje ungachithi lokho onakho. Ukuphumula, "u-hibernate" futhi ukhawule umjikelezo wokuxhumana. Kodwa eduze kokuphela kwesonto kungase kube nomthombo wamandla. Ungayidonsela ebuhlotsheni obunothando.
Lezi zinsuku, isimo sakho sengqondo sizolawulwa ngothando futhi kumnandi. Kuyoba nzima kuwe ukuhlala endaweni eyodwa, ikakhulukazi emsebenzini. Ukwehluleka nokungahloniphi ubuholi bakho akufanele kubekezelelwe. Uma ungafuni izingxabano zomsebenzi, thatha "isikhathi sebhizinisi, nesikhathi sokuzijabulisa." Futhi kungcono ukudlulisela lo mnandi ngokujwayelekile ngesonto elizayo, ngoba kulezi zinsuku impilo yokuzibulala ingaholela emiphumeleni engalungile. Ingxenye yesibili yesonto, uchithe emndenini womndeni, unake izingane futhi ujabulele abazali abathandekayo.
Ukuqala kwesonto ngeke kunikelwe. Imisebenzi eqoqiwe idinga isisombululo esiphuthumayo, futhi ekusukeleni ukuxazulula zonke izinkinga phakathi nobusuku, ungakwazi ukubeka amaphutha amaningi angenakuthethelelwa. Uma ufunda noma udlulisele imibiko, isifungo, ukuqeqeshwa okuphambili, sondela ohlelweni lokulungiselela ngokuziphendulela. Ukuhluleka kungenzeka. Ukusetshenziswa kweviki kwalabo abajwayele ukuxhumana nabo noma ukuqinisa izimo zengqondo ezikhona. Isikhathi esihle kakhulu semihlangano, ukusungula oxhumana nabo abanobungane nabalingani.
Qaphela ngenkathi uhamba emgwaqweni. Izingozi nokulimala kungenzeka. Uma uhlele izenzakalo ezibalulekile kuleli sonto, okudingayo ukuhlushwa okukhulu, kungcono ukulihlehlisa. Kuyoba nzima kuwe ukuthi ugxile futhi uphathe umsebenzi wakho ngempumelelo. Ukuhluleka kuzothatha idumela kakhulu. Okunye kweviki kuzoba nokuzola. Ubudlelwano nezihlobo, uthando, ukuzilibazisa kuzoletha izizathu eziningi zenjabulo. Ngokuphathelene nezimali, lapha, futhi, inhlanhla ephelele. Isonto lesithathu lika-Okthoba lizoba nenzuzo kakhulu. Ungakwazi ukukhokhela imali ongayiphundanga yamuva.
Izimo ziyokhula ngendlela yokuthi ungathembela kuwe kuphela. Ozakwethu bangakwazi ukuhluleka, umndeni ngeke ulalele izicelo zakho, abangani ngeke banikeze okuthandayo, futhi kuphela izingane ezizokwenza ubuhlobo bube nokuthuthuka kunanini ngaphambili. I-sphere yezezimali nayo izokwenza ube nesaba. Zama ukuhlela izindleko ezinkulu kulezi zinsuku, ngoba izinkanyezi zibikezela izindleko ezingalindelekile, ukulahleka noma ukulahlekelwa kwemali.
Ezinsukwini zokuqala zesonto, kufanele uthole ukuthi ubuhlobo buyini. Ukuxuba kungenzeka kokubili emndenini nasemsebenzini. Uma ukushisa komdlandla kukumangalisa, khumbula ukuthi kungenxa yokwehlisa ukuthi ungaxazulula amaphuzu aphikisanayo. Kodwa uma ungakakulungeli ukwenza ukuvumelanisa, uphinde uhambise ingxoxo, izinkanyezi zithembisa ukuthi inkinga izozixazulula futhi ngaphandle komzamo. Sebenzisa ingxenye yesibili yesonto ukuze unakekele impilo yakho. Kuyinto enhle ngezinqubo zokwelapha nezindlela zokwelapha.
Manje iphuzu lakho elibuthakathaka liyimpilo. Uma lezi zifo seziye zahlasela kakade, ungasheshi ukwelashwa, imiphumela yezifo ezingapheli zingase zibe buhlungu kuwe. Kuzo zonke ezinye izimo, ngeke kube okungadingekile ukuthi uhlanganyele ekuvinjeni nasekuthuthukiseni igciwane. Buyekeza ukudla kwakho, esikhundleni sokudla okunzima nezithelo nemifino, ulale kakhulu futhi unike umzimba wakho ukuvivinya umzimba ngendlela efanele. Ingxenye yesibili yesonto ibukeka kahle ekubuyiseleni ubudlelwane obuhle obulahlekile nabathandekayo, abangani, osebenza nabo.
Yeka imisebenzi emnandi. Ngeke bakwenze okuhle noma ubuhlobo nomuntu othandekayo wakho. Kungase kube khona ukungezwani kanye nezingxabano ngesisekelo somhawu. Ubudlelwano nezingane ngeke kuthuthukiswe. Izindlela zakho zokufundisa zizohluleka, futhi kuzodingeka uguqule kakhulu. Kodwa emsebenzini wonke uzothathwa ngendlela ephumelele kakhulu emsebenzini. Abaphathi bayakwazisa umsebenzi wakho futhi mhlawumbe baze bavuze ngebhonasi enomusa.
Ungazithathi umsebenzi womenzi wokuthula, ozokwabiwa kuwe kulezi zinsuku. Ungaphazamisi ezinkingeni zabanye abantu, kungenjalo uzoba ngokweqile. Futhi ngokujwayelekile, zama kuleli sonto ukugwema noma yikuphi ukucasula nezimo zokuphikisana. Awuvunyelwe ukuxhumana nabantu abonakalisayo. Ngisho noma lezo ziyizihlobo zakho, mazithwale isimo sengqondo sabo esibi kwenye indawo. Kungcono ukuhlanganyela ekuvuseleleni ukuthula kwangaphakathi nokuthula. Vakashela amakilasi ezemidlalo azokugcwalisa ngamandla.
Akuyona isikhathi esihle sokusungula oxhumana nabo abasha nolwazi lokushintshanisa. Ungalungiseleli leli sonto futhi uhambo lwemoto. Kukhona ingozi yokudiliza emgwaqeni futhi ngaphandle kokusiza. Futhi ngokujwayelekile, zama ukudlulisa zonke izenzo ezizayo ngokusebenzisa intuition. Ababhula ngezinkanyezi bathi kuleli sonto lika-Okthoba kuzokwethula amakhono akho angqondo. Basebenziseka ukudweba ekuphileni kwakho izinto ezilinde isikhathi eside: uthando, ukuzalwa kwengane, umsebenzi omusha, imali.
I-horoscope elungile yeviki likaDisemba 18-24, 2017
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 evela ku-Pavel Globa kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac
I-Horoscope ye-Capricorn Woman ngo-June 2017
I-Horoscope yama-Aries-abesifazane ngo-Okthoba 2016
I-Horoscope yenhlanhla yesonto likaNovemba 13-19, 2017
Izembozo zokuhlobisa zefoni
Ukubikezelwa ngonya ngoKhisimusi - imikhosi yemilingo yezifiso ezigcwalisayo
Umama kaYulia Vysotskaya utshele ubuhlobo bendodakazi yakhe noAndrei Konchalovsky
Iya esitolo sezimpahla eziseduze
Izingane zenkanyezi zaseRussia zifunda kuphi?
Izindlela zokuhlanza amathumbu kusuka ku-slags ngaphandle kwe-enemas
Isobho elilula nemifino